ဒူဘိုင်းမှာဘာလုပ်သင့်လဲ | အလုပ်အကိုင် - အလုပ်ရှာဖွေရေး - ခရီးသွားအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်းဒူဘိုင်းရှိ Don'ts
ကမ်ဘာပျေါတှငျအများစုကအနာဂတ်မြို့တ Be ရန်ရည်မှန်း
မေလ 22, 2019
မေလ 25, 2019
ကောင်းပြီ, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေနေကြသည်နေစဉ်။ သင်လျှောက်ထားမတိုင်မီသိရန်လိုအပ်ပါအနည်းငယ်အမှုအရာရှိပါသည်။ နှင့်သင်တန်း၏, ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြီးမြောက်ရန်မလွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်ငါသိ၏။ အခက်ခဲဆုံးအချက်ဖြစ်ပါသည် ဖြောင့်အချက်ရန်သင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ နှိမ့်ချရအောင်မြင်မှုမှတက်မသတ်မှတ်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘူး။ ဒါကြောင့်ရေးသားဖို့လွယ်ကူသည်ရိုးသားဖြစ်လိမ့်မည်။ စီမံခန့်ခွဲဖို့အများကြီးပိုခက်။
သငျသညျဖွစျလိမျ့မညျနေစဉ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်ရှာဖွေ, သငျသညျကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိပါသည်။ ကျနော်တို့အလုပ်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရှာဖွေနေအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်ပါ။
1 ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအတွက်လွန်းသတင်းအချက်အလက်
သေချာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံကို တစ်ဦးသင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita ပေါ်တွင်သင်အတိအကျကိုတစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုများအတွက်လိုအပ်သောအတွေ့အကြုံကိုရေးပါမဟုတ်လျှင်။ အကောင်းဆုံးများထဲမှသင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်အလားအလာရှိသောအလုပ်ရှင်ပူဇော်ဖို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုပြသသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်း၏ CV ကိုအဘယ်သို့သောအကြောင်းဖြစ်သင့် သင်ထမ်းရှာဖွေသူသို့မဟုတ် HR မန်နေဂျာပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ရှင်များအတွက်အရေးပါသောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်တယ်လို့ပဲ။ အကြောင်းကိုအဆိုးဆုံးကတော့ လူကြီးမင်း၏ CV ကိုသင်တစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလိုချင်တာတွေရေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သာတန်ဖိုးရှိသောအတှေ့အကွုံမြားပါဝငျမှသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ဒေသခံရပ်ရွာထဲတွင် $ 34 အဘို့အသီးအသီးစီးကရက်ရောင်းစတင်ခဲ့ကြပြီးကတည်းကအလုပ်သမိုင်း၏ 1 နှစ်ပေါင်းထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ အဲဒီမှာသင့်ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းဆင်းပွဲနေ့စွဲထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်သင်သည်အဘယ်သို့ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုချွတ်အတွက်လုပ်ဖို့ကြိုက်တယ်။
ဒူဘိုင်းမှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် CV ကိုပေးပို့ခြင်းလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏။ ဒီတော့ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အသငျသညျကိုသာထမ်းရှာဖွေသူသို့မဟုတ် HR မန်နေဂျာတခုတခုအပေါ်မှာအထင်အမြင်စေရန်3စက္ကန့်ဝန်းကျင်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်က HR ဌာနကကျော်ပို့ခင်၏ CV ကိုကကောင်းတစ်ဦးတည်းရဲ့အသေချာပါစေ။
နေသောအဓိကကလူ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေအင်ဒီးယန်းတွေဟာ, ပါကစ္စတန် နှင့် အီရန်နိုင်ငံသား။ သင်သည်ထိုသူတို့ထဲကအများစုဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်တစ်ခုရဖို့ Extreme ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားလုပ်သားများအများစုဟာဒူဘိုင်းစစ်ဆေးနေနေကြတယ် အကြံပေးချက်များသည်ဘလော့ဂ်များ အလုပ်ရှာဖွေပါ။ ထိုသူတို့ကအလုပ်အကိုင်အသငျသညျထက်အများကြီးပိုမြန်ကမ်းလှမ်းခံယူဖို့အသိပညာအသုံးပြုနေသည် !.
2 ။ Add ဘယ်တော့မှမ သင်၏အဖုံးပေးစာထဲမှာလွန်းသတင်းအချက်အလက်
ဒူဘိုင်းရဲ့ငှားရမ်းမန်နေဂျာများနှင့် HR ဌာနအမှုဆောင်အရာရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိုအတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုဖတ်ရှုဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျဘားအောင်မြင်မှု၏အထက်တန်းကျောင်းရှငျဘုရငျကိုပျက်ကွက်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိနေစဉ်။
သင်သာရာအရပ်ကိုသင့် သငျသညျဤအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်း။ ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အကြီးမြတ်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းကိုဘာမှရေးဖို့ဘယ်တော့မှမ။ သင်တစ်ဦးဆိုးအခြေအနေမှာရှိပါတယ်နှင့်သင်အကူအညီတောင်းရှာကြသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု ရုံဤမျှလောက်မုန်း။
နောက်ထပ်အချက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်မိသားစုခွအေနမြေားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က, သင်တန်း, သာသင်တို့အဘို့ပုဂ္ဂလိကဆက်လက်တည်ရှိသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူသကဲ့သို့, ငှားရမ်းမန်နေဂျာကိုသိရန်လိုသည် သင်ကုမ္ပဏီအဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်.
အစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့အဖုံးစာတစ်စောင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားပါ အဓိကအားဖြင့်ဤအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သေချာသင်ညာဘက်အလုပ်အမှုဆောင်များမှာအဘယ်ကြောင့်အပေါ်အလုံအလောက်အသေးစိတ်ကိုထား Make အလုပ်နှင့်အင်တာဗျူးတွင်ထိုက်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အလုပ်ရှင်များပြည်ပကနေအဖိုးတန်သူတစ်ဦးအဖြစ်သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျကြောင်းသေချာပါစေ။
သင်သည်သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပို့မတိုင်မီအမြဲတမ်းအချိန်ကိုယူပါ။ သေချာအောင်လုပ်ပါ တစ်ဦးကိုပစ်မှတ်ထားဖုံးစာတစ်စောင်ရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို တစ်ခုချင်းစီကိုအလုပ်ရှင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ကခဲယဉ်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့သိကြ၏။ သို့သော်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်သင်၏အရည်အချင်းများနှင့်ကိုက်ညီ။ သငျသညျအကောင်းတစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဒါစုဆောင်းရေးတွေ့နိုင်ပါသည်.
3 ။ ယောဘသင့်အရည်အချင်းများ vs အတွေ့အကြုံကို
သငျသညျကိုက်ညီသေချာအောင်လုပ်ပါ အလားအလာရှိသောအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံက။ အလုပ်ရှာဖွေရေးရှာဖွေဖြစ်ပါသည် ယူအေအီး၌ရှည်လျားသောဖြစ်စဉ်ကို။ ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်အတွက်, သင့်အတှေ့အကွုံလျှို့ဝှက်အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များမှနှိုင်းယှဉ်နီးပါးစုံလင်ခြင်းရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကောင်းပြီ, ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံဒူဘိုင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံဖို့နီးစပ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာရှရှိလူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်လို့ပဲ။
နှင့်နေ့တိုင်းသူတို့စုဆောင်းဖို့ကိုယ်ပိုင် CV ကိုစေလွှတ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်, တတ်နိုင်သမျှနီးစပ်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့ကြိုးစား။ ထိုအခါကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်အလုပ်နှင့်သင်တို့စပ်ကြားသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပွဲကြောင်းသေချာပါစေ။
အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုယူစူပါအရေးကြီးသောဒါဟာင် အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းအဖြစ်အလုပ်ရှုပ်ရာအရပျ၌တည်၏။ နှင့်တဖြည်းဖြည်းအလုပ်ဖော်ပြချက်ရန်သင့်အရည်အချင်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်ဟုအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှာဖွေနေ။
ဒါဟာငှားရမ်းမန်နေဂျာကိုပြသငျသညျအထိဖွင့် သငျသညျအလုပျအတှကျစုံလင်သောအနေဖြင့်အဘယ်ကြောင့်။ ညီမျှခြင်းထဲက guesswork ချန်ထားပါ။
4 ။ အဆိုပါအင်တာဗျူးအပြီးတွင်ရုံမိနစ်အလုပ်တစ်ခုယူဖို့အဆင်သင့်ရှာဖွေနေ
ကောင်းပြီ, အခြားအမှားတစ်ခုကို သင်ရုံဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးမသင့်တော်သောဆေးထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဘူးနိုင်ပါတယ်။ ဤတိုင်းပြည်, သင်တန်း, မွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ဤတိုင်းပြည်များတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။
overdressed မကြိုးစားပါ အင်တာဗျူးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်။ သောသင်ထားတဲ့လူထုံနဲ့တူရှာဖွေနေအဖြစ်နီးပါးအဖြစ်အများကြီးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။ ရှေ့မှာ သငျသညျအစည်းအဝေးတစ်ခုဖိတ်ကြားချက်ကိုရ ကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သုတေသနပြုတစ်နည်းနည်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားရန်။
သင်ရုံလျှောက်ထားထားသောအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမည်သူမဆိုသိသလား ?. LinkedIn သုံးလျှင်မရ ပြီးစားဆင်ယင် code ကိုအဲဒီမှာအလုပ်လုပ်နေကြသူတွေကိုမေးကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့်, သငျသညျအသေးစိတျအကြောင်းကိုသေချာမကျင့်ကိုကျင့်လျှင် ကရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်အခြားသူတွေအမြင်အရ။ သူတို့တစ်တွေနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာဝတ်ထားကြသည်အရာကိုအခြားသူများကိုမေးကြည့်ပါ။ ဒါကပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်လိမ့်မည် အဆိုပါငှားရမ်းမန်နေဂျာဒူဘိုင်းအတွက်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်.
ပဉ္စမအချက်အားလုံးတစ်ဦးသင့်လျော်သောအချိန်ရှိအရာညာဘက်ဟုအကြောင်းပါ။ သင်ရုံကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့ဖုံးစာတစ်စောင်နှင့်အတူလျှောက်ထားအဖြစ်။ ဒူဘိုင်းကနေတစ်ဦးကထမ်းရှာဖွေသူ အကြောင်းကိုအချို့သောစိတ်ကူးရပါလိမ့်မယ် အဘယ်သူသည်သင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်တစ်ဦးလူနေမှုအဘို့ပြု.
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစကားပြော၏ဆိုးမျိုးကျော် 60% ။ ကပြောသည်မဖြစ်သင့်, သောသင် unsaid ဆိုးကျိုးကနျြရစျသငျ့သညျ သာ. ကောင်း၏ အလုပ်အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းပျက်ကွက်။ သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုအတွက်လအနည်းငယ်ကွာဟမှုရှိခဲ့ပါဘူး.
အဆိုပါအင်တာဗျူးအားလုံးသင်အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အကြောင်းကိုဖြစ်သင့် ကုမ္ပဏီသင်အလုပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်လျှင်။ သင်အနေအထားများအတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအောင်သောကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အရည်အချင်းများမျှဝေပါ။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အဘယ်သို့ပြုရပါမည် ?.
တစ်ဦးပွဲအောင်အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံစူးစိုက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုများအကြား။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လမ်းသိပ်ဟုအလုပ်တစ်ခုများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း option ကိုကယ်ခေါက်နိုင်ပါတယ်။
6 Stop - ယူအေအီးအတွက်အင်တာဗျူးအမှား
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုများမှာ နိုင်ငံမဆိုထက်လမ်းပိုကောင်း။ ထိုအသေချာများအတွက်ဒူဘိုင်း, အဘူဒါဘီသို့မဟုတ် Sharjah သငျသညျရိုးရှင်းစွာအထဲကအလုပ်မလုပ်ဘဲအင်တာဗျူးရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတစ်ရံကပဲဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်မခံခဲ့ရနှင့် သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဤအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များအတွက်နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအင်တာဗျူးနှငျ့သငျတို့ကိုရှောက်သွားစီမံခန့်ခွဲလျှင်ပင်ယူအေအီး၌ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးဘူး။
သို့သော်အချို့အင်တာဗျူးနဲ့အလွယ်တကူရှောင်ဖြစ်ကြောင်းယေဘုယျအမှားတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, နှောင်းပိုင်းကဖြစ်ပါဘူး, တစ်ပြန်ခေါ်ဘို့စောင့်ဆိုင်းဘယ်တော့မှ။ ဒါဟာကိုယ့်လမ်းပိုကောင်းခေါ်ခြင်း အလားအလာထမ်းရှာဖွေသူ သငျတို့သအလုပ်တစ်ခုချင်သောသူ့ကိုပြသထားတယ်။
7 သင်ကယူအေအီးကနေကိုးကားဖူးသေချာတာပေါ့ Make
အများဆုံးတစ်ခုမှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရတဲ့အတှကျအအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်။ ပဲရိုးရှင်းစွာသင်၏ CV အတွက်အဖွဲ့အစည်းကိုအခြေခံသည့်ဒူဘိုင်းကနေကိုးကားအစုတခုရှိနေပါတယ်။ အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ် သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေနေလုပ်နေလုပ်နေသည့်အခါ.
ပထမတော့, သင့် HR ဌာနမှဖုန်းခေါ်ပေးပါ။ ထိုအခါပေးဖို့အဆင်သင့်ကိုးကားစာရင်းတစ်ခုဖန်တီးပေမယ့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကုမ္ပဏီများမှထံမှသာ။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အဘယ်သို့ပြုရပါမည် ?. ပွင့်လင်းသင့်ကိုယ်ပိုင် option ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, တံတားမီးမရှို့ခဲ့ပါဘူး။ သင်သည်ထိုသူတို့လိုအပ်သည့်အခါသင်သိဘူး။
8 မေ့အင်တာဗျူးပြီးနောက် Up ကိုလိုက်နာပါမှ
နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့အပြုအမူဖို့ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးအပြီးတွင်ဖွင့်အောက်ပါမဟုတ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်သင်တစ်ဦးအလုပ်ရကူညီပေးနိုင်သည်။ ဥပမာ, သင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသတိပေးတဦးတည်းကိုပိုပြီးအခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည် နှင့်အကောင်းတစ်ဦးအထင်အမြင်အောင်.
ဒူဘိုင်းနဲ့တူအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု သူတို့ရဲ့အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအတွက်တန်ဖိုးထားခံရဖို့။ ဒီတော့ပေါ် မူတည်. လုပ်နေတဲ့သငျသညျတစျနေ့ကအင်တာဗျူးပြီးနောက်ပုံမှန်အားဖြင့်အီးမေးလ်ပို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျိန်းသေသငျသညျဖျောပွဖို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် အချိန်နှင့်သင်စီမံခန့်ခွဲရန်ရှိသည်သောအခွင့်အလမ်းတန်ဖိုးထား.
ထို့အပြင်တက်အောက်ပါသင်တစ်ကြိမ်သာပြန်အချို့ကိုထည့်သွင်းဖို့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးပေးသည် သငျသညျမေ့လျော့ကြပြီအရေးကြီးသောအရာများကို။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ဆန္ဒရှိဘာမှအင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ XYZ ကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကလိုပဲ။ သို့မဟုတ်နောက်ထပ်လက်မှတ် သေသောသူတို့ကိုဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တွင်သင်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ကူညီစေခြင်းငှါ.
ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအများစုဟာ။ သူတို့ကမထင်ကြဘူး နည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာ။ ကောင်းပြီ, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အဘယ်သို့ပြုရပါမည် ?. ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုမကောင်းတဲ့ဘာမှပြောနေမဟုတ် သငျသညျအသကျရှငျကြသောအခါ.
သင်အဘယ်သို့ပြောသည်ကိုအရေးပါသောကြောင့် ထွက်ကော်ပိုရေးရှင်းအနေဖြင့်လမ်းပေါ်။ ထိုအသေချာများအတွက် မန်နေဂျာများသငျသညျသတိရနေဆဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်တို့ကို အကြောင်းပြု. အမြင်ကရေရှည်အတွက်ကိစ္စမရှိ။
ဥပမာအားဖြင့်, အလားအလာရှာဖွေစုဆောင်းပုံမှန်အား3အလုပ်ရှင်များမှတက်နောက်ဆုံး6ကနေကိုးကားစစ်ဆေးပါ။ ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးအလုပ် left လျှင် မကောင်းတဲ့မှတ်ချက်အပေါ်။ ထိုအရပ်၌ထံမှမန်နေဂျာသင်သရဲခြောက်သောမှပြန်လာနိုင်မယ့်လိမ်လည်မှုပြုမိလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုအသုံးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလေ့လာမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားပါ။ ထို့အပွငျအစဉ်အဆက်ပြောပြဘူး သင့်ရဲ့ဟောင်းကုမ္ပဏီ တစ်ဦးအမှားဖြစ်ခဲ့သည်။
အမြဲတမ်းနည်းမှန်လမ်းမှန်၌သင်တို့၏စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားပါ။ အစဉ်အဆက်လိမ်လည်မှုလုပ်ဖို့မကြိုးစားပါနှင့်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရိုးသားဖို့, ဖြစ်ပြီး, ပန်းတိုင်တစ်ခုဆီရောက်ဖို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေ။ ဒူဘိုင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမဆိုခွင့်ပြုတော်မမူကြောင်းကိုတစ်ဦးအလွန်တင်းကြပ်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်မကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဆိုဒုက္ခ၌သင်တို့ကိုတင်ထားတော်မူမည်, သင်တစ်ဦးအတွက်ဆင်းသက်စေမည် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်သင်အတွက်ဒေသခံထောင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဇာတိမြေမှပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရလိမျ့မညျ။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးအချက်ကိုဖြစ်တယ်, သင်လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။
စိတျထဲတှငျကြောင်းနှင့်အတူ, အင်ဒီးယန်းများနှင့်ပါကစ္စတန်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်ကြိုးစားနေ။ ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ပြင်းထန်သောယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူဤတာဝန်များကိုမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့ပြုလုပ်မယ့်စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ရ ပွဲချင်းပြီးအနည်းငယ်အလုပ်အကိုင်များအင်တာဗျူးတွေကို set up။ အခုဆိုရင်သင်ဒူဘိုင်းအတွက်မပွုနိုငျသောအရာကိုသင်တို့သိကြ၏။ အခုတော့အရေးယူတဲ့အစီအစဉ်သို့သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအမဲလိုက်လာပြီများအတွက်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ CV ကိုများနှင့်ဖုံးစာတစ်စောင်ပွတ်နှင့်ကောင်းစွာကျမ်းစာ၌ရေးထားရပါမည်။
အင်တာဗျူးကို set up လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? လုပ်သာလုပ်ပါ!
ပင်ကောင်းစွာအတွေ့အကြုံရှိမန်နေဂျာများ, ကျွမ်းကျင်သူများ၏သို့သော်များစွာသော တောင်အာဖရိကဆီကနေ နှင့် ဖိလစ်ပိုင်။ တချို့ကကြိမ်ခဲယဉ်းတဲ့အလယ်တန်းအရွယ်အစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လျောက်ပတ်သောအင်တာဗျူးရဖို့ရှာတွေ့နေကြပါတယ်။
သင်လိုအပ် အမှားတွေအချို့ဒူဘိုင်းရဲ့ type ကိုရှောင်ရှားရန်။ သူတို့အမှန်တကယ်အလုပ်အနေအထားလုံခြုံရေးတစ်ခု option ကိုရတဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချပေးမည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအသေချာကြောင်းအမှတ်ပေးအဘို့သင့်အခွင့်အလမ်းကိုလျှော့ချဘို့ အထူးသဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကို။
ကျနော်တို့ကအမြဲသေချာစေရန်ကြိုးစားနေ ပြည်ပမှာအနေဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ တူညီတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဒူဘိုင်း၌ရှိသောကျွမ်းကျင်သူများအတွက်လျှောက်ထားကြောင်း။ နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျိန်းသေသင့်ရဲ့အနာဂတျအတှကျစောင့်တဲ့အကြီးအနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်သင်အတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင် ယူအေအီးထိုက်တန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို။ သငျသညျဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်တစ်ခုရသင့်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအလုပ်တစ်ခုအဖြစ်မှန်အောင်ကြိုးစားပါ။ တူနေသည်ဘယ်လောက်ဆိုးနေပါစေ။ potholes ရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါ။ ထိုအခါနောက်ဆုံးအသက်ရှုဖို့စစ်တိုက်ခြင်း။
အဆိုးဆုံးအနေအထား၌ရှိကြ၏ MBA ဘွဲ့ရအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကို။ လူအပေါင်းတို့သည်ငယ်ရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလိမ့်မယ်အဘယျကွောငျ့မယ့်မည်သည့်သဘာဝကျပါတယ်မဟုတ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီ.
အငယ်ဆုံးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူသူတို့ပြီးနောက်ဒီကြီးမားတဲ့ကြွေးမြီဖျော်ဖြေဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရ။ ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုမိမိတို့ဘာသာထွက်ခွာလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်အတွက်, သူတို့သည်အလွန်ငွေရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းရဲ့အလုပ်ဈေးကွက်ထဲမှာအသစ်တခုလူတစ်ဦးအဖြစ်။ သငျသညျ, အနိမ့်စတင်ရန်သင်တစ်ဦးပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားရပ်တန့်ဖို့လိုပါတယ်။ သငျသညျဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ကော်ပိုရိတ်ကမ်ဘာပျေါတှငျထရွေ့လျားစတင်ပါဖို့လိုပါတယ်။ ကနေအဲဒီမှာ-မရှိချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စလေ့လာမှုအဘယ်သို့သောလယ်သူတို့မဆိုလူတစ်ဦးများအတွက် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်လုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ။
ပိုပြီးရွေးချယ်စရာရှိခြင်းကောင်းပြီအတွေ့အကြုံရှိကလူ။ ဒါပေမယ့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာသင်ကခွင့်ပြုတဲ့အရေအတွက်ကတဦးတည်းအချက်အဖြစ်ပါးစပ်နှင့်ဆက်သွယ်မှု၏လောကဓာတ်လည်းမရှိ တစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မှာအလုပ်တစ်ခုရဖို့.
သင်ကမမျှတသည်ထင်စေခြင်းငှါ တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်သင်တို့အဘို့။ ဒါပေမယ့်သင်ကပင်မသိရပါဘူးလူတစ်ဦးမှသင့်ကုမ္ပဏီပေးပါလိမ့်မယ် ?. ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းတစ်နေရာကောင်းများ၏ကြင်နာတတ်၏သို့သော်သင်လိုက်နာရမည်ကြောင်းဥပဒေလည်းမရှိ။ တဖန်သင်တို့တစ်မှားယွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုငှားရမ်းသူအမှားတွေမပါလျှင်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, တကငွေကြေးထောက်ပံ့အမှားဖြစ်ပြီး, တရားဝင်သူကိုတက် fix ဖို့တာဝန်ရှိသည်။ နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်လအနည်းငယ်အချိန်ကငွေနှင့်သင်တန်း၏ကြီးမားသောငွေပမာဏအများကြီးယူပြီးကြောင်းအများဆုံးကိစ္စများတွင်။
ဒူဘိုင်းအတွက် Manager ကို
ကောက်ချက် - သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်?
ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသည်သည်းခံခြင်းနှင့်ပြဌာန်းခွင့်အစုတခုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အမဟုတ်ဘဲလူတိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီအဘို့အမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည် စမတ်မြို့။ သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီထံမှအနည်းငယ်အကြံပေးချက်များရရှိထားမျှော်လင့်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့အောင်မြင်ရန်သူတို့ကိုအသုံးချပါလိမ့်မယ် ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်။
အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita ကို update ။ ထို့နောက်အထူးသတဲ့အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုဖန်တီးသင့်ရဲ့အဖုံးစာတစ်စောင်ကိုစောင့်ရှောက်။ ပုံမှန် CV ကို Send နှင့် အလားအလာအလုပ်ရှင်များမှ CV ကိုပေးပို့ခြင်းမပြုမီအလုပ်ကြော်ငြာအတွေ့အကြုံကိုစစ်ဆေး.
ကောင်းပြီ, လူတွေ CV ကိုအတွက်ခိုးနိုင်ခဲ့ကြတယ်မီ။ သို့သော်ဆဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်၏။ အခုတော့တစ်ဦးရိုးရှင်းသောနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများပြု နီးပါးတိုင်းအလုပ်အမှုဆောင်နှင့်အတူ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးပြုကြလိမ့်မည်စစ်ဆေးလျှင်။ ဒူဘိုင်းရှိပါးလွှာသောမျဉ်းကြောင်းရှိ သင့်ရဲ့ရိုးရိုးသားသားနှင့်အတူ.
သင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အ Get ဖို့ဘာလုပ်နေခြင်းကိုသင့်သလဲ
သငျသညျကိုသှားမတိုင်မီသင်ဘာလုပ်နေသင့်ပါတယ် !. ယင်းချ Get အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကို၏စာရင်း နှင့်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များဘို့သင့်ကိုလျှောက်ထားသင့်ကမ်းလှမ်း legit အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သာ။
လိမ်လည်မှုအကြံပေး Check နှင့်သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်သိကျွမ်းခြင်းပညာရှိသည်။ အရေးကြီးအဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်ကိုးကား play အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလာပြီအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ အွန်လိုင်းလာခြင်းနှင့်တရားဝင်ဖြစ်ရပ်များမှာ ပိုပြီးအလုပ်အခွင့်အလမ်းများကိုပါ။
ဒါကြောင့် website တွင်သွားနှင့်ဝဘ်လိပ်စာထည့်ပါ။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကကိုသင်ရှာတွေ့ အွန်လိုင်းစစျဆေးဖို့ခက်ခဲအီး။ သင်တို့သည်ဤရှာဖွေစုဆောင်းမဆိုပေးဆောင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါဘူး။ သူတို့ထဲကတချို့ကနိုင် သင့်ရဲ့ကိုယ်စားအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်သငျသညျကိုကူညီပေးပါတယ်။ သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူတို့ထဲကအများစုဟာကိုယ့်လိမ်လည်မှုကုမ္ပဏီများမှဖြစ်ကြသည်။
ဒူဘိုင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေကွောငျးထငျရှားစီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်း၏အတားအဆီးထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ဦးကအများကြီး, သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအလုပ်ရှာတွေ့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်ပင်ကတန်ဖိုးရှိအဆုံး၌။
သင်တို့ကဲ့သို့အချို့သောအခြေခံကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုရတဲ့လိမ့်မည် ဖောက်သည်ကော်မရှင်အခြေစိုက်စခန်းအခွင့်အလမ်းများကိုဝန်ဆောင်မှုပေး။ သို့သော်, သင့်အိပ်မက်များ၏အနေအထားဆိုတော့အစပိုင်းမှာဒူဘိုင်းအတွက်မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အစမှာမဆိုအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ကော်ပိုရေးရှင်းအဆင့်ပေါ်တက်ရွှေ့ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့်, သငျသညျအဘယျသို့လုပ်နေတာရပါမည် ဒူဘိုင်းသနည်း သေချာလာမယ့်စင်မြင့်ရန်သင့်မြည်းကိုပြောင်းရွှေ့စေသည်။ hardcore အလုပ်ရှာဖွေနှင့်အလုပ်ကျင့်ဝတ်။ ရပ် Arabic အဘိဓါန်အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုအိပ်မက်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။
ဒူဘိုင်းတွင်ပေါ်တူဂီ Speakers လမ်းညွှန်
CV ကိုအခမဲ့တင်ပါ။ 📁